Bannaanka: Sheekada Guusha | Martech Zone
Bannaanka: Sheekada Guusha
Monday, May 4, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Sidii aan sugayay tayda duulimaad shalay, Waxaan soo xasuustay labadii shay ee aan illaaway - jaakadeyda isboortiga iyo mid ka mid ah buugaagta ku yaal in la aqriyo raso
Nasiib wanaag, bakhaarka iridda agtayda ku yaal ayaa xulasho buug macquul ah iyo Bannaanka: Sheekada Guusha, by Malcolm Gladwell, ayaa jiray. Waxaan taageere weyn u ahaa Malcolm Gladwell - labadaba maqaalkiisa New Yorker iyo buugaagtiisa. Daaran Gladwell, Shirkad Degdeg ah ayuu qoray:
Ma jiro qof ku jira xusuusta dhawaanta oo u leexday doorka hoggaamiyaha fikirka ganacsiga si sharaf leh ama saameyn leh sida Gladwell. Wax yar ka dib buugiisii ​​ugu horreeyay, Qodobka Taabashada: Sida Waxyaabaha Yar Yar U Sameyn Karaan Farqi Weyn (Little, Brown, 2000), oo ku dhacay calaacalaha Mareykanka, Gladwell wuxuu ka booday qoraaga shaqaalaha guud ee The New Yorker si uu ugu suuq geeyo ilaah.
Soo-saareyaashu maaha wax ku saabsan suuq-geynta, in kastoo. Waxay ku saabsan tahay guul. Malcolm Gladwell waa qoraa sheeko yaab leh - wuxuuna la wadaagayaa qaar cajiib ah, gaar ah, sheekooyin ku saabsan waxyaabo aan caadi ahayn oo ku saabsan taariikhda kuwa guuleysta. Buuggu wuxuu tilmaamayaa xaaladaha ay xaaladuhu si fudud ugu wada safan yihiin guusha, su'aalo ka qabaan nasiibka ku jira, isla markaana ay ku taageeraan shaqada adag - gaar ahaan - saacado badan (10,000) saacadood ayaa dadka badankood u horseedi kara khibrad.
Qaar ka mid ah sheekooyinka gaarka ah… maxay sababta xirfadleyda xeegada ay si aad ah ugu dhasheen bilaha ugu horreeya sanadka? Maxay Aasiyaani ugu fiican yihiin xisaabta? Sidee IQ ula xiriiraa guusha? Maxay reer koonfureedka dagdag ugu dagaallamaan? Sidee qowmiyadu door intee la eg uga ciyaartay shilalka tirada badan ee diyaaradaha Kuuriya sannado ka hor? Sidee hababka casriga ah ee wax-u-dhigistu u beddelaan fursadaha guusha ee carruurteenna?
Akhlaaqda buuggu waa mid weyn. Anaga awooddo saameyn ku yeelata guusha dadka adoo badalaya jawiga ay ku nool yihiin, ka shaqeeyaan iyo ciyaarta. Gladwell wuxuu qoyskiisa u noqdaa tusaale weyn… isagoo la hadlaya naf-hurnimada ay shakhsiyaadka nolosha qoyskiisa ku caawiyeen weligoodna beddeleen mustaqbalka iyo guusha Gladwell naftiisa.
Waan jeclahay buugaagta caqabad ku ah caqliga iyo sida ay wax yihiin. Tani xaqiiqdii waa qaybta aan ugu jeclahay Gladwell. Waan dumiyey buuggan oo hadda waxaan u baahanahay inaan helo wax aan ka akhriyo jidka gurigeyga!
Tags: DabkaCapsule CRMCatchwind SMScms iphone appraadinta caalamiga ahipad app
Maxaa Sameeya Falanqeeye Weyn?
Waxay umuuqataa inuu bartay sirta ku haysa xiisahaaga – u sheeg sheeko fiican. Waad ku mahadsantahay dib u eegista.
Kani waa mid ka mid ah buugga aan ugu jeclahay Malcom Gladwell. Waxyaabo aad u fiican!
Waxaan sidoo kale aad ugu riyaaqay Outliers. Ujeeddada buuggu wuxuu ahaa in keliya dadaal oo keliya ka dhigayn mid si la yaab leh u guuleysta, laakiin marar badan waa isku-xirnaanta duruufaha saxda ah iyo waqtiga oo ay tahay inay qayb ka noqdaan isla'eg sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waxaan is arkay aniga oo ka fekeraya in qayb ka mid ah waxa Gladwell uu sameynayay ay ahayd diiwaangelinta tusaalooyinka madax-bannaanida Ilaah iyo sida gacantiisa aan la arkeynin ugu shaqeyneyso dhacdooyinka adduunka. Qorniinku wuxuu ka hadlayaa sida isagu [Eebbe] u kiciyo oo u dumiyo boqorrada iyo boqortooyooyinka mana aha inaannu aqoonsanno silsiladda dhacdooyinka illaa heerkaas.
Qoraal wax ku ool ah, waxay igu kaliftaa inaan ka fekero goorta ugu yaryahay ay tahay inuu dugsiga bilaabo. 😉
Wow - Curt! Haa, way fududahay in la iloobo 'annaga mas'uul ma nihin'. WIth ikhtiyaar ikhtiyaar ah, in kastoo, waxaan u maleynayaa inuu Eebbe na siiyo fursado maalin kasta si aan u caawinno kuwa nagu hareeraysan. Waxaan ka mid noqonay duruufaha u horseedi kara kuwa kale guusha. Su’aashu waxay tahay miyay tahay iyo inkale inaan isku fureyno si aan runti isku caawino midba midka kale inuu guuleysto.
Waad saxan tahay saaxiibkay. Intaa ka dib, waxaan badbaadiyey maahan oo keliya maxaa yeelay Ilaah baa ina jecel, laakiin inaan u qabanno shuqullo wanaagsan oo sharaf iyo mahadnaq leh isaga.
Arrinta kale ee maskaxda ku soo dhacaysa ayaa ah in nolosha guuleysata, sida adduunku u cabbiro, laga yaabo inaysan run ahaantii guuleysan. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan wax maqal ah oo wata shandado shandado wata. 🙂
Iska ilaali sxb.
Waan jeclaa buuggan sidoo kale. Gaar ahaan maaddaama wiilkeyga weyn uu ciyaaro kubbadda cagta oo uu kaliya fadhiyo 15 maalmood kahor taariikhda gooynta taasoo ka dhigeysa inuu ka mid yahay ciyaartoygii ugu da'da weynaa koox kasta oo uu ku ciyaaro.
Agoosto 24, 2009 saacaddu markay ahayd 3:53 PM
Waan akhriyay buugga oo kooban. Waxay umuuqataa mid aad u xiiso badan. Waan helay nuqul ka mid ah. Waad ku mahadsantahay wadaagidaada.
soo noqo si aad inbadan u akhriso.